Salesforce Kushambadzira Cloud Kunakidzwa Center: AMPScript uye Cloud Peji Muenzaniso | Martech Zone
Salesforce Kushambadzira Cloud Kunakidzwa Center: AMPScript uye Cloud Peji Muenzaniso
Chitatu, Kukadzi 3, 2021 NeChishanu, Kurume 5, 2021 Douglas Karr
Nyaya yechokwadi… basa rangu rakanyatsodarika makore gumi apfuura apo ndakatanga chinzvimbo seInternational Consultant yeExactTarget (yava kunzi Marketingforce Cloud). Basa rangu rakanditora pasi rese kubatsira makambani mukuvandudza kusangana kwakadzika nepuratifomu uye ini ndakavaka ruzivo rwezvemapuratifomu zvekuti ndakakwidziridzwa kuita Chigadzirwa Manager.
Zvinetso zveChigadzirwa maneja zvesangano raimbove rekuvandudza-muridzi zvakazonditungamira kuti ndienderere mberi. Yakanga iri huru sangano, asi ini handina kumbodaro zvechokwadi anazvo chigadzirwa. Nekudaro, nepo vezera rangu vachitsigira, kutengesa, uye kushambadzira kwechigadzirwa kwakatarisa kwandiri kuti ndiite shanduko chaiyo… chokwadi ndechekuti timu yekusimudzira yaigaro gadzirisa imwe mhinduro uye ini ndaizoziva mazuva asati aburitswa.
Imwe yemapurojekiti angu ekupedzisira aishanda pane yemukati script chikuva iyo yaigonesa vatengi vedu kuwedzera script kumaemail avo. Ini ndakashanda nemumwe Chigadzirwa Manager uye isu takaita toni yekutsvagisa… pakupedzisira tichifunga kugadzira nzira yeJQuery-maitiro nemabasa edu pachedu, asi kusanganisira kugona kupasa nekushandisa arrays, kushandisa JSON, nezvimwewo. mhinduro… kusvikira yarova budiriro. Pakutanga mukutenderera kwechigadzirwa, raibhurari yangu yakabviswa uye mugadziri mukuru akatsiva ne AMPscript.
Makore gare gare, iyo Salesforce Partner kambani ini wandinoshanda naye parizvino iri kuita yakaoma, kubatanidza zvebhizimusi, uye ini ndinozviwana ndazvimbirwa muAMPscript zuva nezuva - kungave kunatsiridza zvine musoro zveemail kana kuburitsa Cloud Mapeji. Ehezve, kushushikana kwekushanda zuva nezuva uye zuva ne AMPscript kunondivimbisa kuti danho risiri iro rakaitwa kumashure mumazuva iwayo… mhinduro yangu ingadai yakave yakanyanya kunaka. Ndiri kunzwa sekunge ndadzokera pakuronga chirongwa TRS-80 muBASIC.
Mupepeti waunoshandisa kuCloud Mapeji haaregerere. Izvo hazvibate nyaya dzakareruka sekuzivisa akasiyana kana echikanganiso syntax nekodhi yako. Muchokwadi, iwe unogona kunyatso kushambadzira peji iro rinongogadzira iyo 500 server kukanganisa. Kune zvekare maviri mazita eminda yemapeji ako… usandibvunze kuti sei.
Pro-tip: Kana iyo Cloud Mapeji isina kudzosa sampu dhata kana iwe wave kuda kushambadza uye zvinoita sekunge iri kugadzirisa narini… iwe uchakanda kukanganisa. Kana iwe ukashambadza chero zvodii, iwe uchafanirwa kuti ubvise iyo Cloud Peji zvachose uye kutanga pamusoro. Fungidziro yangu ndeyekuti zvivakwa izvo zvakavakirwa pariri hazvina njere zvakakwana kuti zvione shanduko yekodhi uye zvinongoramba zvichigadzirisa kodhi yakachengetwa.
Kunze kwaizvozvo, iwe uchave unofara kuziva mazhinji akanyorwa emakodhi masampuli ane yavo yavo syntax kukanganisa. Yay! Icho chiitiko chinotyisa… asi iwe unogona uye unogona kuchishandisa nekuti chinopa kumwe kuchinjika kunoshamisa.
Chikamu chinyorwa: Kune Cloud peji nyowani ruzivo… Uko zvinoita sekunge vakangovhiya zvakare peji uye haripe chero rwumwe ruzivo. Ini ndinonyatsoda iyo yekare vhezheni zvirinani kune yakawanda-nhanho yekutsikisa kuteedzana.
Ndichiri kambani yangu Highbridge inovaka yakaoma, Ajax-inogoneswa mhinduro dzinobatanidza akawanda masisitimu uye kusanganisa dhata yekuwedzera ne AMPscript, SSJS, Cloud Mapeji, uye email ... ini ndaida kugovera muenzaniso wakapusa wezvekuti ungatange sei kungoshandisa AMPscript kubvunza yako Salesforce semuenzaniso uye kudhonza data rekumashure. Mune ino kesi, yakapusa boolean munda iyo inochengeta tenzi kuzvinyoresa mureza. Iwe unogona, chokwadika, kuwedzera iyi kodhi kuti ugadzire iro rese peji rezvaunofarira kana nzvimbo yepurofiti yaunogona kushandisa
Gadzira Iyo Cloud-Peji Rinki neMubhadhari Dhata
Kana iwe ukaona yako Cloud Peji ruzivo, iwe unogona kuwana yakasarudzika peji ID yeiyo peji iwe iwe yaunogona kuisa mukati ako maemail.
Iyo syntax inotevera:
AMPscript yeSalesforce Dhata kuburikidza neCloud Mapeji kuburikidza neData Ekuwedzera
Nhanho yekutanga kuvaka yako AMPscript yekuzivisa akasiyana uye kutora data kubva kuSalesforce yekushandisa mune rako peji. Mumuenzaniso uyu, yangu Salesforce boolean munda inobata iyo yechokwadi kana nhema inonzi OptedOut:
Iye zvino unogona kuvaka yako HTML uye fomu iyo inoitisa chikumbiro:
Ndizvozvo… zviise zvese pamwe uye iwe une peji rekufarira iro rakagadziridzwa nereji yako yekunyoresa uye wopasa chikumbiro chekuvandudza munda weboolean (ichokwadi / nhema) muSalesforce. Iye zvino unogona kuvaka mibvunzo yemhando dzakatenderedza munda iwoyo kuti ugare uine chokwadi chekuti vanyowani vakasarudzwa kunze havana kutumirwa chero email!
Maitiro Ekusimudzira Yako Anofarira Peji kana Mbiri Center
Ehezve, izvi zvinongova teaser yezvinobvira neinofarira peji. Zvokuvandudza zvaungade kufunga nezvazvo
Zadza iwo chaiwo mavara kubva kune imwe dudziro yedata kuitira kuti timu yako yekushambadzira igone kugadzirisa zviri mukati peji chero pavangade vasina kubata kodhi.
Zadza bhuku rezvinyorwa rekuwedzera uye rova ​​kuburikidza nezvinyorwa kuti upe-kupinda kana kubuda pane zvaunofarira kuwedzera kune tenzi kuzvinyoresa.
Gadzira chikonzero chekuwedzeredzwa kwedhata kuti utore kuti nei vako vanyore vari tenzi kuzvinyoresa.
Zadza rumwe ruzivo rwehuwandu kubva kuSalesforce rekodhi kuti upe ruzivo rwekuwedzera.
Gadzira iro peji neAjax kuitira kuti iwe ugone kunyatso rizadza iro.
Govera nzira yekunyoresa kuitira kuti mushandisi wako akwanise kuwana yavo yepamoyo nzvimbo panguva chero ipi.
Zvimwe Zvekushandisa zve AMPscript
Kana iwe uchitsvaga rumwe rubatsiro rwekudzidza uye kuendesa AMPscript, heino som zviwanikwa zvihombe.
AMPscript Guide - yakarongedzwa nevamwe vashandi veSalesforce, iri dhatabhesi rakazara re AMPscript syntax, kunyange mienzaniso iri nyore. Dai yaive yakasimba kwazvo, inogona kunge yakakodzera iyo kudyara.
Trailhead AMPscript - Salesforce's Trailhead ibasa rekudzidza remahara uye rinokwanisa kukufambisa kuburikidza nemisimboti yemutauro neese AMPscript, SSJS, uye kuti vaviri vacho vanogona sei kudyidzana.
Stack Shanduko yeSalesforce - nharaunda huru yepamhepo yekukumbira rubatsiro netoni yeAMPscript kodhi sampuli.
Iko kune toni yemukana mukubatanidza yako Cloud Mapeji ne Salesforce kuti upe yepamusoro mushandisi ruzivo. Uye kana kambani yako iri kunetseka, unogona kugara uchitaurirana nesu kuti ubatsire!
Tags: ampscriptgore remapejiiifDzoseraSalesforceObjectsKwidziridzoSingleSalesforceObject